पूर्वलडाकुको बन्दुकदेखि सुईसम्मको यात्रा | Jukson
मोरङमा जन्मिएकी ३४ वर्षीया मेनुका दाहाल अहिले झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकास्थित शान्तिनगर स्वास्थ्य चौकीकी प्रमुख छिन्। तर यो भूमिका र स्थानसम्म आइपुग्न उनले जीवनमा धेरै सङ्घर्ष र आफैँसँग अन्तर्सङ्घर्ष गर्नुपर्यो।
उनी भन्छिन्, विगत सम्झँदा दुःख लाग्छ।
-स्वेच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी लडाकुहरू
उन्नाइस वर्षको उमेरमा क्रान्तिु र जनमुक्तिु का कुराले उनलाई लट्ठ्यायो। त्यतिखेर देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चल्दै थियो र उनी माओवादी बनिन्। एक वर्षमै बन्दुक बोकेर २०६१ सालदेखि उनी माओवादी लडाकुका रूपमा विभिन्न स्थानमा आक्रमण गर्न गइन्। रक्तपात र मृत्यु नजिकैबाट देखिन्।
समयले कोल्टे फेर्यो, शान्तिसम्झौता भयो।
त्यसपछि सुरु भयो उनको जीवनमा नयाँ सङ्घर्ष। भविष्यको चिन्ताले राम्रो सीपको आवश्यकता महसुस भयो। उनी स्वास्थ्य सहायक (हेल्थ असिस्टेन्) को प्राविधिक शिक्षा लिन थालिन्।
छोरी जन्मेको १२ दिनमै पहिलो वर्षको परीक्षा दिनुपर्यो। रक्तस्राव हुँदा पनि उनले हिम्मत हारिनन्।
अरूलाई परीक्षा कसरी पास गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो। मलाई चाहिँ सुत्केरी भएपछि परीक्षा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो।
तेस्रो वर्षको परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि उनले प्राविधिक खरदारको पदका लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन तयारी थालिन्। यता घरपरिवार र सानी छोरी, उता भविष्यको चिन्ता। मेनुका भन्छिन्, त्यो बेला मलाई एकदमै गाह्रो भयो। सानो छोरी थिइन्।
लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन त्यति सजिलो मानिँदैन। तर उनले नाम निकालिन्। धनकुटामा खटिएको नौ महिनामै एक तह माथि प्राविधिक सुब्बाको परीक्षाको तयारी थालेको उनी बताउँछिन्। त्यसमा पनि उनी उत्तीर्ण भइन्। सरकारले उनलाई सोलुखुम्बु पठायो। सोही पदमा सरुवा भएर हाल उनी झापामा कार्यरत छिन्।
आफ्ना दिदीबहिनी र श्रीमान्को सहयोगविना यो अवस्थामा आइपुग्न असम्भव थियो भन्ने उनलाई लाग्छ।
द्वन्द्वकालमा बन्दुक बोकेर लड्न गएको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, यिनै हात हुन् बन्दुक बोक्ने पनि।
के कुराले उनलाई स्वास्थ्य सेवामा तान्यो त ?
उनी भन्छिन्, घाइते साथीहरूको सेवा गर्ने मौका पाएकोले स्वास्थ्य क्षेत्रमै जाने इच्छा जागेर आयो। त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिक शिक्षा लिन सुरु गरेँ।
उनी भन्छिन्, त्यतिबेला नियमित कलेज गएको भए, आज म यो भन्दा माथि उठ्थेँ होला।
पहिला र अहिलेको उनको जीवनमा कस्तो भिन्नता छ त ?
उनी भन्छिन्, पहिला म एउटा राजनीतिक दलकी सैनिक थिएँ, अहिले म जनताकी सेविका भएकी छु। फरक त्यत्ति हो।